Afaan OPDO/ODP keessaa kijiba malee dhugaan hin bahu!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAfaan OPDO/ODP keessaa kijiba malee dhugaan hin bahu!!
“Guyyaa har’aa 15/3/2019 Daballoon OPDO mooraa xoolayii dhaquu WBO HD ABO gidduu shakkii uumuuf shira xaxaa oolte. dobballoon kun:
I/G Poolis Komishinii Oromiyaa Obbo Alamaayoo
Afayaayii irraa adde Loomii Badhoo
Gaaffi WBO dhiyeese:
bakki nuf hin taanee nuf hajijiiramu?
Waadaa jaarsoliin nuuf galan leenjiin keessan baatii lama qofa nun jedhanii osoo leenjii hin eegalin baatii tokkoo ol xumureerra.
maqaa ABO maaf nami keenya hidhamaa.
Deebii obbo Mogos kennan:
bakka kana mootummatu filtee bakka balla kanarraa hin qabnu. Yeroo leenjii ji’a lama kan jedhu nuti akka mootummaati hin beennu, jaarsoliitu isin sobee. Nama badii qabuu ammayuu seerati ni dhiheesinaa isin keessas kan lubbuu poolisii baase ykn qabeenya namaa saamee yoo jiraate siachi adda baafnee seeratti bunna. Wanti dhiifami haagodhamu jedhameera, jedhu isa dirree lolaa qofa. WBO akka duguggamee hiikatee hin galle kan godhee HD ABO ti. Waraqaa lama qopheessanii isa miidiyaarra jiruu jarsoliitti kennuun isa. Isa hin hiikatinaa jedhu immoo ajajoota WBO dhoksaan ergan yoo soba jettan kun na harka jiraa isinii dubbisuun danda’a jedhee warra kaan bosonatti hanbisatanii isin akka hiikattan godhanii. Isin gidduu garaagarummatu jiraa itti jette. WBO mooraa xoollayi keessa jiru shakii keessa galee jiraa gariin dhugaa jiru beeka. gariin dhaabi keenya hanga ammaatti dhufee nu gaffachuu dhiisuun sababa kanaatii jechaa jiru.”
Injifannoo WBO Zoonii Lixaa
Lola harr’a humna goolessitu wayyaanee fi WBO jidduutti lixa wallaggaa bakkootii garaagaraatti ta’een wbon injifannoo boonsaa galmeesseera. Waaqayyoo gogaa leencaa kan itti uwwise WBOn koo rukkunnaa ofirraa qolachuu taasiseen diinarratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun diina 360 ajjeeseera. 200 ol madoo taateetti.
#Rasaasa—–5000 yommuu ta’u
#Gama keenyaan wbo irraa nama lama nujalaa wareegamaniiru!
INJIFANNOON UUMMATA OROOMOOF!!!”